မြန်မာစာရေးဆရာများ စာရေးဆရာဖြစ်ပြီးနောက် စာမဖတ်တော့သဖြင့် စာများများဖတ်ရန် ဆရာကြီးမောင်?? - Yangon Media Group
အဆိုပါတိုက်တွန်းပြောကြား ချက်ကို မတ်၃ရက် JASMINE PALACE ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည့် မြန်မာစာပေလောကကို စာပေဖြင့် ကျေးဇူးပြုခဲ့ကြသော စာရေးဆရာ ကြီး၊ ဆရာမကြီးများကို ဂုဏ်ပြုပူ ဇော်ကန်တော့ပွဲတွင် ပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”စာဖတ်တာကတော့ အရင် ကတော့ဖတ်ကြတယ်။ စာရေးဆရာ ဖြစ်ပြီးသွားရင် မဖတ်ကြတော့ဘူး။စာရေးဆရာဖြစ်ပြီ စာဖတ်စရာမလို တော့ဘူးတဲ့။ အဲဒီလိုပြောတယ်။တော်တော်အံ့သြစရာ ကောင်းပါ တယ်။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာအရပ် သားမှမဟုတ်ပါဘူး။ စာရေးဆရာ တိုင်းဖတ်ရမှာ။ နိုင်ငံရေးသမားလည်း ဖတ်ရတာပဲ။ ဘုန်းကြီးလည်းဖတ်ရ တာပဲ။ ဘယ်လူတန်းစားမဆို နှာ ခေါင်းပေါက်နဲ့ အသက်ရှူနေသူ ဘယ်သူမဆို စာဖတ်ရတာချည်းပဲ။ စာမဖတ်ရင် မတိုးတက်တော့ဘူး။ ဗမာလိုဖတ်တာ ဗမာလူမျိုးကိုး။ များ သောအားဖြင့် ပညာတတ်တွေပဲ အင်္ဂ လိပ်လိုလည်းဖတ်တတ်တယ်။ အင်္ဂ လိပ်လိုလည်းဖတ်ရမယ်”ဟု ပူဇော် ကန်တော့ပွဲတွင် ဆရာကြီးမောင်သာ နိုးကပြောသည်။
အဆိုပါပူဇော်ကန်တော့ပွဲကို အလှူရှင် ဦးအောင်နှင့် ဒေါ်မြမြဝင်း မိသားစု (ဉာဏ်လင်းစာပေနှင့်ရွှေ သမင်စာပေ)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံစာရေး ဆရာကလပ်တို့မှကြီးမှူး၍ ကျင်းပ ခြင်းဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာကြီး၊ ဆရာမ ကြီး ၁ဝဦးအနက် ခုနစ်ဦးတက်ရောက် ခဲ့ကြောင်းနှင့် ယနေ့စာပေလောက တွင်တိုးတက်မှုများရှိသလို ဆုတ် ယုတ်မှုများလည်းရှိနေသည်။
အသက်(၉၄)နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော စာရေးဆရာကြီးလေးမြိုင်က ”လက် ရှိစာပေလောက တစ်မျိုးကတော့ ဆန်းသစ်တိုးပွားတာတွေရှိတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ မူလက မြန်မာစာပေအရင်းအမြစ်တွေက နည်းနည်း နည်းနည်း နောက်ဆုတ် သွားတယ်။ အဲဒါကတော့မကောင်း ဘူး။ ရှေးကမြန်မာစာပေတွေက အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ထိထိမိမိထင်ထင်ရှား ရှား တင်ပြထားတာတွေရှိတယ်။မြန်မာလူမျိုးရဲ့ဂုဏ်ကို ဖော်ပြနေ တယ်။ မြန်မာလူမျိုးရဲ့စွမ်းပကားကို လည်းပြနေတယ်။ မြန်မာလူမျိုးရဲ့ စိတ်စေတနာက ဘယ်လောက်ထိ ပရဟိတစိတ်ရှိလဲဆိုတာကို ဒီစာ ပေတွေက ပြနေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီ ဆုံးရှုံးခြင်းက တိုင်းပြည်နဲ့လူ မျိုးအတွက်လည်း ဆုံးရှုံးတယ်”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
အခမ်းအနားတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ဌေး၊ မြန်မာ စာရေးဆရာကလပ် အမှုဆောင်စာ ရေးဆရာထင်လင်းဦး၊ မြန်မာစာရေး ဆရာကလပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကောင်းသန့် တို့မှအမှတ်တရစကား၊ အခမ်းအ နားကျင်းပဖြစ်ပုံ၊ ကန်တော့ခံဆရာ ကြီး၊ ဆရာမကြီးများ၏ စာရင်းပြုစု ခဲ့ပုံနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ အလှူရှင် ဦးအောင် (ဉာဏ်လင်းစာပေနှင့် ရွှေသမင်စာ ပေ)မှ ပူဇော်ကန်တော့ပွဲလုပ်ရခြင်း အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ စာ ရေးဆရာ၊ ဆရာမကြီးများကို ပူဇော် ပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်း၊ ဆရာချစ်ဦးညို မှကန်တော့ကြိုးတိုင်ပေးခြင်း၊ စာ ရေးဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများမှ မေတ္တာစကာြး>ွမတ်ကြားခြင်း၊ ဆရာ လယ်တွင်းသားစောချစ်မှ မုဒိတာ စကားပြောခြင်းနှင့် ကံစမ်းမဲဖောက် ပေးခြင်းအစီအစဉ်များဖြင့် ကျင်းပ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်/ကျဉ်းဟောင်းများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာအတွက် တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဆေ??